30 Iikholeji eziPhambili zeMiddle Midges neeYunivesithi
Uluhlu lweekholeji ezingama-30 ze-Midwest eziphezulu kakhulu
I-Midwest iquka uluhlu olubanzi lweekholeji kunye neeyunivesithi-ezizimeleyo kunye noluntu, ezisezidolophini nakwiindawo zasemaphandleni, ezinkulu kunye ezincinci, ezonqulo kunye nezenkolo. Iikholeji ezingama-30 kunye neeyunivesithi ezingezantsi ziye zanyulwa ngokubhekiselele kwizinto ezahlukeneyo kubandakanywa amazinga okugcina, amazinga okugqweswa, ukubandakanywa kwabafundi, ukhetho, kunye noxanduva lwemali. Izikolo zifakwe kwi-alfabhethi ukuphepha ukuhlukana okungafaniyo okuzahlula i-# 1 kwi-# 2, nangenxa yokungabi nantlupheko yokuthelekisa i-university yophando enkulu kwikholeji encinci yezobugcisa.
Ngaba Uya Kufika? Qaphela ukuba unamabanga kunye neemvavanyo zokuvavanya okufuneka ungene kuzo zonke iikholeji eziphambili zaseMidwest kunye nesixhobo samahhala esivela kwiCappex: Bala amaKhosi akho kwiikholeji eziphezulu eziphezulu.
Iikholeji ezingama-30 nakwiiyunivesithi ziluhlu olungezantsi zikhethiweyo zivela eMidwest: i-Illinois, i-Indiana, i-Iowa, i-Kansas, eMichigan, eMinnesota, eMissouri, eNebraska, eMntla Dakota, e-Ohio, eMzantsi Dakota, eWisconsin.
Ukwahlukana: isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi; olufanelekileyo lwemali; 13 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule; Inkqubo yezemidlalo ye-NCAA Division III; iiklabhu zabafundi abangaphezu kwe-100 kunye nemibutho
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili ye-Albion College
ICarleton College Bell Tower. Roy Luck / Flickr
Ubhaliso: 2,105 (zonke iidanga lokugqibela)
Ukwahlukana: enye yezona zikolo ezilishumi ezilungileyo kakhulu zoobugcisa be-liberal ; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; Ukugcinwa okuphezulu kunye nezinga lokuphumelela; i-campus ekhangayo kunye ne-880-acre arboretum; 9 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yeCarleton College
I-Western Western Reserve University. Charles Burkett / Flickr
Ukwahlukana: u- 9 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ootitshala; ilungu loMbutho weeNyuvesi zaseMelika ukwenzela iinkqubo ezinzulu zophando; isahluko se-Phi Beta Kappa kwiinkqubo zobuninzi bobugcisa kunye neenkqubo zesayensi; iinkqubo zobunjineli ezinamandla; enye yeekholejini zase-Ohio
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela i- Case Western Reserve yiprofayili yaseYunivesithi
College of Wooster. JesseLegg / Flickr
Ukuphazamiseka: ilungu leekholeji ezintlanu ze-Ohio Consortium; isahluko se-Phi Beta Kappa kwiinkqubo zobuninzi bobugcisa kunye neenkqubo zesayensi; Umlinganiselo we-11 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty; enye yeekholeji zase-Ohio; Inkqubo yokufunda ngokuzimeleyo; Iprogram yezemidlalo yeCandelo le-NCAA Division III
KwiCyunivesithi yaseCreighton. I-White & Blue Review / Flickr
Indawo: Omaha, Nebraska
Ubhaliso: 8,393 (4,203 izifundo eziphantsi kootitshala)
Uhlobo lweziko: iYunivesithi yangasese
Ukwahlukana: umlinganiselo we-12 ukuya ku-1 umlinganiselo wesifundo / umfundi; olufanelekileyo lwezemali kunye nexabiso; ilungu leCandelo le-NCAA I- Confederation Big East ; enye yeeyunivesithi eziphezulu zamaKatolika
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iphrofayli yaseYunivesithi yaseCreighton
Ukuphazamiseka: ilungu leekholeji ezintlanu ze-Ohio Consortium; enye yeekholeji zase-Ohio; isahluko se-Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; Umlinganiselo we-10 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty; I-campus ye-900-ekre iquka indawo yokugcina i-acre 550-acre; olufanelekileyo lwezemali
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iprovensi yaseYunivesithi
I-DePauw University Arts Performing Centre. Rovergirl88 / Wikimedia Commons
Indawo: iGreencastle, e-Indiana
Ubhaliso: 2,225 (zonke iidanga lokugqibela)
Ukwahlukana: umlinganiselo we-10 ukuya ku-1 umlinganiselo wesifundo / umfundi; enye yeekholeji zase Indiana ; isahluko se-Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; iinkqubo ezahlukeneyo ezihlanu; I-campus ibonisa ipaki ye-acre 520-acre; olufanelekileyo lwezemali
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayli yaseYunivesithi yakwaDePauw
Iholo laseGreeninn. Aureliusxv / Wikimedia Commons
Indawo: Grinnell, Iowa
Ubhaliso: 1,699 (zonke iidanga lokufunda)
Ukwahlukana: u- 9 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ootitshala; enye yeekholeji zezobugcisa eziphezulu kwilizwe; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; iimfuno ezimbalwa eziphambili; Iprogram yezemidlalo yeCandelo le-NCAA Division III
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yeCginnell College
Ukwahlukana: owaziwayo kwiKholeji likaLoren Pope Etshintsha Ubomi ; 13 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule ; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; Iimitha ezili-5 ukusuka eLwandle lwaseMichigan
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yeTholo yeKholoji
University of Illinois Wesleyan. i-soundfromwayout / Flickr
Indawo: Bloomington, Illinois
Ukwahlukana: umlinganiselo we- 11 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule ; ubungakanani beklasi yobukhulu be-17; Ukugcinwa okuphezulu kunye namazinga okuphumelela; isahluko sePhi Beta Kappa malunga namandla kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayli yaseYunivesithi yase - Illinois Wesleyan
IYunivesithi yase-Indiana University. prw_silvan / Flickr
Uhlobo lweziko: uphando loluntu kwiriyunivesithi
Ukwahlukana: isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi; ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMerika ukufumana amandla okuphanda; ekhangayo ii-acra 2 campus; I-Hoosiers incintisana kwiCandelo le-NCAA IIkomidi elininzi kwiNkomfa
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayili yase-Indiana University
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yeKlamazoo College
Kenyon College. unobumba / iFlickr
Ukuphazamiseka: ilungu leekholeji ezintlanu ze-Ohio Consortium; Umlinganiselo we- 10 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty ; ubungakanani beklasi yobukhulu be-15; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; I-campus ifaka i-380-acre nature
Indawo: Decorah, Iowa
Ubhaliso: 2,169 (zonke iidanga lokugqibela)
Ukwahlukana: umlinganiselo we-12 ukuya ku-1 umlinganiselo wesifundo / umfundi; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; ugxininiso kwiziko; Ukuthatha inxaxheba ephakamileyo ekufundeni kwamanye amazwe; xabiso kakhulu; Iiprogram zezemidlalo ze-NCAA Division III
Ukufumana ulwazi olungaphezulu kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iprogram yaseLuther yaseKholeji
Ukwahlukana: isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi; Umlinganiselo we- 10 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty ; ubungakanani beklasi yobukhulu be-17; abemi abahlukeneyo; Ukugcinwa okuphezulu kunye namazinga okuphumelela; enye yeekholeji zezobugcisa zoncedo kakhulu zelizwe; I-NCAA Division III yezemidlalo
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yeCapealester College
IYunivesithi yaseMarquette. scottfeldstein / Flickr
Indawo: Milwaukee, Wisconsin
Ubhaliso: 11,294 (8,238 abadlulileyo)
Ukwahlukana: umlinganiselo we-14 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ubuchule; ubukhulu bomgangatho ophezulu weklasi we-25; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; Ii-majors ezili-116 kunye nabantwana abangama-65; ilungu leCandelo le-NCAA I- Conference East enkulu
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iprofayili yaseMarquette yeYunivesithi
IMiami University, eOhio
IYunivesithi yaseMiami eOxford. ellievanhoutte / Flickr
Ukwahlukana: enye yeeyunivesithi ezindala kunazo zonke kwilizwe; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; Ukhuphisana kwiCandelo le-NCAA I -Confederation Mid-American Conference ; izinga eliphakamileyo lokuphumelela kwiCandelo leSikolo
INyuvesi yaseNyakatho-ntshukumo yokuThengisa. powerbooktrance / Flickr
Uhlobo lweziko: uphando lwangasese yunivesithi
Ukwahlukana: enye yezona zikhetho ezikhethileyo kuzo zonke iikholeji zase-Illinois; ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMerika ukufumana amandla okuphanda; enye yeeyunivesithi eziphezulu ze-US ; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; ilungu leCandelo le-NCAA I nkomfa enkulu yezemidlalo
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokumkelwa, tyelela iphrofayli yeNyuvesi yaseNyakatho - ntshona
IYunivesithi yaseTours Dame Golden Dome. i-mandy pantz / iFlickr
Indawo: Notre Dame, Indiana
Ubhaliso: 12,393 (8,530 abadlulileyo)
Hlola i-Campus: IYunivesithi yaseTours Dame Photo Tour
Ukwahlukana: isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obunamandla kunye nezesayensi; kwamkelwa kakhulu; I-campus enkulu ye-1,250-ekre iquka amachibi amabini; ukufakwa kwezikolo ezigqibeleleyo; Umlinganiselo ophezulu kakhulu wokuphumelela; Amanqanaba amaninzi ekulwela amaqela ase-Irish akhuphisana kwiCandelo le-NCAA I- Conference ye-Atlantic Coast . enye yeeyunivesithi eziphezulu kunye neeyunivesithi eziphezulu zamaKatolika
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iphrofayli yaseTeame Dame
I-Oberlin College. Joe Shlabotnik / Flickr
Ukuphazamiseka: ilungu leekholeji ezintlanu ze-Ohio Consortium; Umlinganiselo we- 11 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty ; I-Conservatory eqinile yoMculo; isahluko sePhi Beta Kappa ; Ikholeji yokuqala e-US; umzimba ohlukeneyo wabafundi
I-Rose-Hulman Institute of Technology
I-Rose Hulman Institute of Technology. UColin Shipley / Wikimedia Commons
Indawo: Umhlaba wase-Indiana
Ubhaliso: 2,278 (aba-2202 abafundiswe phantsi)
Uhlobo lweZiko: iikholeji zobunjineli zobuncinane
Ukwahlukana: ngokuqhelekileyo kubeka i-# 1 phakathi kweekholeji eziphezulu ze-engineering degree . I-campus egcwele i-acra 295; Umlinganiselo we-12 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ubuchule; indlela yokufunda ukufunda; izinga eliphezulu lokubeka umsebenzi
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yaseRose-Hulman
Ukwahlukana: isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi; Umlinganiselo we-12 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ubuchule; ziboniswe kwiikholeji zikaLauren Pope ezitshintsha ubomi ; ukuphumelela okuphezulu kunye nokugcinwa kwamazinga; olufanelekileyo lwemali; I-NCAA Division III yezemidlalo
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yaseSt. Olaf
KwiYunivesithi yaseTuruman State
KwiYunivesithi yaseTuruman State. DavidOaks / Wikipedia
Indawo: Kirksville, eMissouri
Ukubhalisa: 6,379 (6.039 abafundi bezithuba ezidlulileyo)
Ukwahlukana: enye yeekholeji zezobugcisa eziphezulu eziphezulu zelizwe; xabiso kakhulu; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; Umlinganiselo we-16 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty; ubungakanani beklasi yobukhulu be-24; Iiprogram zezemidlalo ze-NCAA II
Ukufumana ulwazi oluninzi kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iprogram yaseTuruman State University
KwiYunivesithi yaseChicago. puroticorico / Flickr
Indawo: Chicago, Illinois
Ubhaliso: 15,775 (6,001 izifundo zakudala)
Ukwahlukana: Inkqubo yokuhlaliswa kwezindlu zabafundi abaneminyaka eyi-1; enye yeekholeji zase-Illinois ezikhethileyo; isahluko se-Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; ilungu loMbutho weeMerika zaseYunivesithi ngamandla ophando; enye yeeyunivesithi eziphezulu ze-US
Hlola i-Campus: iYunivesithi yaseCichic tour photo
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yeYunivesithi yaseChicago
IYunivesithi yase-Illinois e-Urbana-Champaign
IYunivesithi yase-Illinois e-Urbana Champaign. sirmikester / Flickr
Indawo: i- Urbana ne-Champaign, e-Illinois
Ukwahlukana: enye yeyunivesithi ephakamileyo yoluntu ; esinye sezikolo zobunjineli eziphezulu ; ilungu loMbutho weeMerika zaseYunivesithi ngamandla ophando; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; ilungu leCandelo le-NCAA I- Big Ten Conference
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile ye-UIUC
Ukwahlukana: enye yeyunivesithi ephakamileyo yoluntu kweli lizwe; ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMelika ukwenzela iinkqubo ezinzulu zophando; isahluko se-Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; ilungu leNgqungquthela enkulu yeGhumi
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseMichigan
Yunivesithi yaseWisconsin Madison
Yunivesithi yaseWisconsin Ibhola. i-broil broy / Flickr
Ukwahlukana: enye yeyunivesithi ephakamileyo yoluntu; ilungu loMbutho weeNyuvesi zaseMelika ukwenzela iinkqubo ezinzulu zophando; isahluko se-Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; ekhampasi yamanzi; ilungu leCandelo le-NCAA 1 INgqungquthela enkulu yeChumi
Ukufumana ulwazi olungaphezulu kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iprofayile yaseYunivesithi yaseWisconsin
IYunivesithi yaseWashington eSt. Louis. 黄若云 / Flickr
Indawo: St. Louis, eMissouri
Ubhaliso: 15,047 (i-7,555 izifundo zakudala)
Ukwahlukana: eyunivesithi ekhethiweyo kwaye ehloniphekileyo eMissouri; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMelika ukwenzela iinkqubo ezinzulu zophando; Ukugcinwa okuphezulu kunye namazinga okuphumelela; kwikholeji yokuhlala
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa kunye nedatha yokwamkelwa, tyelela iphrofayili yaseWashington
KwiKholeji yaseW wheaton, e-Illinois
KwiKholeji yaseW wheaton, e-Illinois. DiscoverDuPage / Flickr
Indawo: Wheaton, Illinois
Ubhaliso: 2,901 (2,456 abaphumelele phantsi)
Uhlobo lweZiko: iikholeji zobunini bobugcisa bobuKristu
Ukwahlukana: esinye sezikolo ezingama-40 ezivezwe nguLoren Pope kwiikholeji ezitshintsha iiLives ; Umlinganiselo we-12 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ubuchule; abahlukeneyo kunye nabafundi abavela kwiinkonzo ezingaphezu kwama-55; iphakamileyo yezobugcisa zobugcisa
Ukufumana ulwazi olungaphezulu kunye nedatha yokungeniswa, tyelela iprofayile yeCroat College
IYunivesithi yeBhola yeYunivesithi. Ifoto nguAndy Lyons / Getty Izithombe
Ukwahlukana: enye yeekholeji zaseKatolika eziphezulu ; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; iiprogram ezingabalulekanga; AbakwaMusketeers bancintisana kwiCandelo le-NCAA I- Conference ye-Big East
Qaphela ukuba unamabanga kunye neemvavanyo zokuvavanya ozifunayo ukuze ungene kwelinye lale kholeji zaseMidwest eziphezulu nakwiiyunivesithi kunye nesixhobo samahhala esivela kwiCappex: Bala iCandelo lakho lokungena
Ukuba nguMxhasi weKlabhu
2020 IPGA Championship
Izigulane zamanzi ezininzi, i-Family Belostomatidae